बैंककै नीतिले बैंकिङ खस्क्यो : सर्वेक्षण | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← म्याग्दीमा पहिरोले पाँच घर बगायो
हेर्नुस त कतै तपाईको पासवर्ड त लिक भएको छैन ? →
बैंककै नीतिले बैंकिङ खस्क्यो : सर्वेक्षण
काठमाडौं, असार २९ -वित्तीय संस्थाको आर्थिक हैसियत खराब हुनुमा सम्बन्धित बैंकको नीति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। नागरिकन्युजडटकमले यो साता गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये ७८ प्रतिशतले बैंकको आर्थिक स्वास्थ्य खराब हुनुमा उनीहरूले अवलम्बन गरेको नीति प्रमुख कारण रहेको जनाए। बैंकको अवस्था खराब हुनुमा ८ प्रतिशतले ऋणी र १४ प्रतिशतले नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको मत प्रकट गरे।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बैंकले ऋणीहरूमाथि चर्को दबाब दिइरहेको छ। सबैखाले ऋणीलाई यस्तो दबाब दिनु गलत रहेको सहभागीको ठम्याइ रह्यो। खराब ऋणीलाई मात्र दबाब दिनुपर्थ्यो भन्नेमा ६२ प्रतिशतले मत दिए भने १३ प्रतिशतले बैंकहरूको कदम नै गलत रहेको जनाए। बैंकहरूको कदम सही हो भन्ने २५ प्रतिशत थिए।
बैंकहरूले असल र खराब ऋणीप्रति समान व्यवहार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, यी बैंकहरूलाई नियमन गर्ने निकायले उनीहरूको व्यवहारलाई कसरी हेर्छ त? बैंकहरूले ऋणीलाई गर्ने व्यवहारप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो नदिएको ७० प्रतिशतले जनाए। १४ प्रतिशतले भने राष्ट्र बैंकको भूमिका ऋणीको पक्षमा रहेको र १६ प्रतिशतले यो विषय राष्ट्र बैंकको चासोमा नपर्नेमा मत दिए।
सेवा क्षेत्र भएकाले बैंकले आफ्ना ग्राहकको मर्का बुझ्नुपर्ने हो। तर, नेपालका बैंकहरूले ग्राहकको समस्यालाई आफ्नो स्वार्थसँग मात्र जोड्ने गरेको सहभागीको धारणा रह्यो। सहभागीमध्ये ९ प्रतिशतले मात्र बैंकहरूले ग्राहकको समस्या बुझ्ने गरेकोमा मत दिए। ३८ प्रतिशतले ग्राहकलाई वास्तै नगर्ने र ५३ प्रतिशतले भने ग्राहक फकाउन मात्र देखावटी रूपमा समस्या बुझेजस्तो गर्ने गरेको बताए।
अब राष्ट्रपति सक्रिय त हुन्नन्? राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्दो अन्यौलताको जिम्मेवार को? नागरिक सर्वेक्षणमा सहभागी हुनुहोस्
तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले ऋणको व्याज ५० प्रतिशतसम्म बढाए। बैंकको तरलता सुधार आएपछि भने उनीहरूले बचतकर्ताको व्याज ह्वात्तै घटाए भने आफूले बढाएको ब्याजदर ज्यादै न्युन मात्र घटाए। यसैमा आधार रहेर बैंकहरूले दिने ब्याजभन्दा लिने ब्याज किन चाँडो बढाउँछन् भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। सहभागीमध्ये ७२ प्रतिशतले छिटो नाफा कमाउन बैंकहरूले यस्तो असन्तुलित व्यवहार देखाउने गरेको जनाए। ५ प्रतिशतले खराब कर्जा घटाउन यस्तो व्यवहार गरेकोमा मत दिए। २३ प्रतिशतले भने नाफा कमाउने होड र खराब कर्जा कटौती दुवैका लागि बैंकहरूको व्यवहार यस्तो हुने गरेको जनाए।
ब्याज असुल्ने बैंकहरूले सँगै सेवा शुल्कसमेत लिँदै आएका छन्। ब्याज लिएपछि सेवा शुल्क असुल्नु जायज हो? भन्ने प्रश्नमा ८० प्रतिशतले गलत भएको जनाए। १५ प्रतिशतले ब्याज र सेवा शुल्क दुवै असुल्नु जायज रहेकोमा मत दिए भने ५ प्रतिशतले यो विषय’bout कुनै जानकारी नरहेको बताए।
आर्थिक हिसाबले साना ग्राहकलाई बैंकहरुले प्राथमिकता दिएको छ या छैन भन्ने बुझ्न गरिएको प्रश्नमा ६१ प्रतिशतले प्राथमिकता नदिएकोमा मत दिए। प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने ५ प्रतिशत रहे भने ३४ प्रतिशतले क्रमिक रूपमा बैंकहरूले साना ग्राहकलाई महत्व दिन थालेको जनाए।
नागरिकन्युजको यो साताको सर्वेक्षण वर्तमान राजनीतिक अवस्थामाथि केन्द्रित छ। तलको लि‌कमा क्लिक गरी आफ्नो मत जाहेर गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं।